Caruur timid Iswiidhan iyagoo kaligood ah ayaa lala dajiyey dad danbiilayaal ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirkii : John Alexander Sahlin/TT
Caruur timid Iswiidhan iyagoo kaligood ah ayaa lala dajiyey dad danbiilayaal ah
La daabacay fredag 12 februari 2016 kl 10.40
Baaritaan uu saameeyey wargeyska SvD ayaa kashifey in caruuraha dalkaan yimaada iyaga oo aan wax waalid ahi la socon lagu meeleeyo ama lala dajiyo dad danbiilayaal ah si xunna loola dhaqmo isla markaasna hadba loo geeyo qoysas kala duwan.
Wargeyska ayaa farta ku godey in maamulada degmooyinka dalkaani ay mar walba jabiyaan sharciyada dhawraya xuquuqda ilmahaas qoysaska lagu meeleynayo ,arrimahaas ayaa dhacaya iyadoo ay iminka dalkaan Iswiidhan joogaan caruurtii abid ugu badneyd oo bulshada caawimaad uga baahan.
Dalkaan Iswiidhan ayaa sanadkii hore waxaa soo galey caaruurtii abid ugu badneyd oo dalkaan yimaada iyagoo aan wax waalid ahi la socon, waxaana sanadkii hore dalkaan soo galey ilaa iyo 30 000 oo caruuraha noocaas ah.
Degmooyinka dalkaan ayaa iyaguna waxay la daalaa dhacayaan sidii ay caruurahaas ugu heli lahaayeen guryo ku haboon oo ay ku meeleeyaan taas oo markii ay iyaga ku adkaatey in ay helaan qoysas ay caruurahaas la dajiyaan, hawlgaliyey shirkado gaar loo leeyahay oo iyagu u soo hela qoysas caruurtaas lala dajiyo dabcana arrimahaas macaash ay ka helaan.
Shirkadahaan ayaa sida ay sheegtey waaxda wararka ee Ekot waxay maalintiiba ilmihiiba ka macaashaan inta u dhaxeysa 2000 ilaa iyo 3000 oo karoon taas oo bishii gaari karta inta u dhaxeysa 60 kun ilaa iyo 90 kun oo karoon .
Catarina Helling waa madax qeybeed ka hawlgasha waaxda arrimaha bulshada ee degmada Huddinge:
-meeleynta caruurtaan lacago xoog leh ayaa laga macaashaa ,taasi waa mid dhab ah.
Dawladda Iswiidhan ayaa degmooyinka ilmahaan meelo dajinaya waxay ku siisaa lacag dhan kun iyo sagaal boqol oo karoon maalintii laakiin sida ay Catarina Odenberg oo ka mid ah madaxda sooshalka ee degmada Norrtälje sheegtey kharashkaasi wuxuu ahaa mid aan arrinkaas xal u helideeda ku filneyn deyrtii la soo dhaafey .
-Waxaan ka hadleynaa waa baahi weyn oo jirta iyo degmooyinka oo ku kala tartamaya in mid deegaan u helo caruurahaas sidaas daraadeed qiimihii ayaa kacay ,maantana 1900 oo karoon ilma kaligi socod ah meel laguma dajin karo,ayey tiri Catarina Odenberg.
Caruurahaas qoysaska lagu meeleeyey ayaa qaarkood waxay la kulmeen xadgudubyo waaweyn iyo bahdilaad,waxaana sanadkii hore ciidamada booliiska loo gudbiyey dacwado dhankaas la xiriira oo dhan ilaa iyo 51 qadiyadood.
Wargeyska ayaa kashifey ilmo lala dajiyey nin horey danbi galmo la xiriira afar bilood oo xarig ah loogu xukumey iyo sidoo kale ilmo lala dajiyey nin horey qof kale u diley.
Ilma kale ayaa isna waxaa lala dajiyey haweeney shan jeer oo kala duwan xabsiyo loogu xukumey danbiya kala duwan oo ay gashey awgood.
Waxaas oo dhan oo dhacaya ayaa wargeysku soo heley ilmo ka mid ah kuwaas dhibta la kulmey oo muddo laba sano ah aan la kulmin qofka kummuunka uu dagan yahay u qaabilsan dhanka bulshada ama cayrta.
Fahim waa ilmo 15 jir kana yimid dalka Afqaanistaan isagoo kaligiis ah.
Wiilkaan ayaa aabihiis dhintey qoyskiisiina ay ku kala lumeen dalka Turkiga gudihiisa ,waxaana dalkaan Iswiidhan lala dajiyey qoys dagen guri villa ah oo ku yaala magaalada Stockholm ka hor intii uusan dalban in qoyskaas laga kexeeyo.
Qoykaas lala dajiyey Fahim ayaa waxay dajiyeen qol aad u qabow oo ay biyo musqusha ka imaanayaa soo galayaan.Waxayna u diideen in uu guriga banaanka uga soo baxo.
Qoyska wiilkaas loo geeyey ayaa u sheegey in uusan la xiriiri karin xafiiska sooshalka isla markaasna waxay ku handadeen in dalkiisii Afqaanistaan dib loogu celin doono taas oo Fahim walwal iyo walbahaar ku abuurtey.
Wiilkaan ayaa rafaad iyo calool xumo mutay,cuntada uu reerkaas gurigooda ka cunaana waxay aheyd oo kaliya ukun.
Qoysaska caruurahaas lala dajiyo ayaa la siiyaa lacago u dhexeeya 12 000 ilaa iyo 19 000 oo karoon bishiiba.
Qoyskaas Fahim lala dajiyey ayaa sidoo kale waxaa lala dajiyey ilma kale oo isna dalkaan Iswiidhan yimid isagoo kaligiis ah ,waxayna qoyskaasi dajiyeen qol hoose oo bakhaar u ahaa.